लुम्बिनी विकास बैंकको लाभांश संशोधन, कति थपियो बोनस सेयर ? - Aathikbazarnews.com लुम्बिनी विकास बैंकको लाभांश संशोधन, कति थपियो बोनस सेयर ? -
लुम्बिनी विकास बैंकको लाभांश संशोधन, कति थपियो बोनस सेयर ?
लुम्बिनी विकास बैंकले सेयरधनीहरूलाइ दिने भनेको लाभांश संशोधन गरेको छ ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७, २०७८ को मुनाफाबाट यसअघि सेयरनीहरूलाइ बोनस १० प्रतिशत र नगद ३.७१२ प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट बैंकले उक्त संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ लाभांश दर सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा बैंकले अब आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को मुनाफाबाट १३ प्रतिशत बोनस र ०.६८४२प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेर बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन्
बैंक अफ काठमाण्डूले १४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न मंसिर २९ मा डाक्यो साधारण सभा
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश परिमार्जन, बोनस दर बढ्यो
शिखर इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी ४६ रुपैयाँ
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ६४ प्रतिशतले बढ्यो
विधि, विधान र पद्धति: हात्तीको देखाउने दाँत